Voina · Mey, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Mey, 2017
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Mey, 2017
Nikaragoà: Ny Takaitra Navelan'ny Horohorontanin'ny Taona 1972
Tamin'ny 23 Desambra 1972, namely an'i Managoa, Nikaragoà ny horohorontany mahery vaika amin'ny maridrefy 6.2, namono olona 5.000, sy maratra 20.000, ary tsy manan-kialofana 250.000. Ankizy tamin'izany fotoana izany ilay bilaogera Nikaragoàna, Homero, saingy manana ny fahatsiarovana ireo voka-dratsiny, izay nosokajiany tamin'ny lahatsoratra vao haingana tao amin'ny bilaoginy.
Vietnam: Mitohy Ny Fitakiana Ny Rariny Herintaona Taorian'ilay Rano Voapozina Nahafaty Trondro Marobe
Azia Atsinanana 28 Mey 2017
"tsy maintsy manaiky ny andraikitra feno ny Formosa ary manao ireo ezaka ilaina amin'ny famerenana ny tontolo iainana madio ho an'ny firenentsika, ny vahoakantsika ary i Vietnam Afovoany mialohan'ny fandaozany an'i Vietnam."
Thailandy: Fiadiana ho An'ny Fahavelomana sy Fahaiza-mamorona Mandritra ny Tondradrano
Azia Atsinanana 24 Mey 2017
Mihatsara ny toe-draharaha ao Thailandy satria efa misintona ny rano tondraka, saingy ny taham-pafatesana izao no efa nahatratra nihoatra ny 600. Ny loza voajanaharin'ny tondradrano tao Thailandy no ratsy indrindra tao anatin'ny dimy taona lasa fa nampiseho ihany koa ireo toetra mahay mamorona nanànan'ny olona raha niaritra ny tondradrano izy ireo.
Bilaogy Ho An'ny Hetsika Vonjitaitra
Hafanàm-po nomerika 22 Mey 2017
[....] tetikasa tsara ho an'ireo izay manohana ny fandraisana andraikitry ny Global Voices
Afrika Mainty 07 Mey 2017
Ity Firenena Afrikana Tatsinanana ity no iray amin'izay ahitana lozam-pifamoivoizana ahafatesan'olona be indrindra ato amin'ny kaontinanta.
“Ady Masina” Nataon'ny Ministry Ny Tontolo Iainana ao Filipina, Zarainy Ao Amin'ny Facebook Ny Fitsidihany ireo Toeram-Pitrandrahana Mitafo Lanitra
Azia Atsinanana 05 Mey 2017
"Hitako nazava tsara fa novonoin'ireo fakon'ilay toerana fitrandrahana ny fihariana ara-toekaren'ilay faritra manontolo," hoy ny nosoratan'ny sekreteran'ny tontolo iainana tao amin'ny pejiny Facebook .
Miresaka Fahakiviana Lalina Mihataka Lavitra Amin'ny Fanilikilihana Ara-tsosialy ny Indiana
Azia Atsimo 03 Mey 2017
"Ao am-poko, mino fa fotoana mety izao ho an'izao tontolo izao hiadiana amin'ny fahakiviana lalina amin'ny fomba ara-drariny."